सुधारको मुख्य योजनाकार प्रअ नै भएमा विद्यालय सुध्रिन्छ – EducationPati – A complete news portal on Education in Nepal
लेखक : कुलप्रसाद खतिवडा
२४ जेष्ठ २०७७, शनिबार कुलप्रसाद खतिवडा, वरुणेश्वर मावि
पहिले औषत रहेको ओखलढुंगाको वरुणेश्वर माविमा २०७० मा जब कुलप्रसाद खतिवडा प्रधानाध्यापक बन्नुभयो, तब विद्यालयले काँचुली नै फेरेको छ । शिक्षा मन्त्रालयबाट गएको तीन वर्ष लगातार पूर्वाञ्चल र प्रदेश नम्बर १ बाट उत्कृष्ट बनी पुरस्कृत हुन सफल विद्यालय ‘नमूना विद्यालय’ घोषितसमेत भएको छ । विद्यालयमा गएको केही वर्षमा अपत्यारिलो सुधार गर्न सफल प्रधानाध्यापक खतिवडासँग गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप ।
विद्यालयको शैक्षिक, आर्थिक, भौतिक अवस्थालाई तुलनात्मक रुपले हेर्दा सन्तोषजनक नै छ । तर, सुधार गर्न हामी अहोरात्र जुटेका छौं । विद्यालयमा हाल ८०० भन्दा बढी विद्यार्थी छन् । उनीहरुका लागि ४६ जना शिक्षक–कर्मचारी कार्यरत छन् । कक्षा ११ र १२ मा चारवटै संकाय छन् । कक्षा ९ देखि नै पशुविज्ञान विषयक प्राविधिक शिक्षाको कक्षा सञ्चालन भइरहेको छ ।
अन्य विद्यालयभन्दा यो किन फरक छ ?
मुलुकका सामुदायिक विद्यालयहरुको शिक्षाको गुणस्तर जुन हिसाबले घटिरहेको देखिन्छ । समुदाय र अभिभावकको विश्वास घटिरहेको अवस्था छ । विद्यार्थी संख्या पनि घटिरहेकै बेला छ । शैक्षिक सरोकारवालाहरुको विश्वास पनि त्यस्तै छ । तर, हाम्रोमा भने ठीक उल्टो छ । हामीले शैक्षिक सुधारका योजनाहरु निर्माण र त्यसको कार्यान्वयनमा दृढतापूर्वक लाग्ने गरेका कारण यस विद्यालयको शैक्षिक अवस्था राम्रो भएको छ । शैक्षिक अवस्था राम्रो भएसँगै अभिभावक र समुदायको विश्वास जित्न सफल भएका छौं । जसले गर्दा सरोकारवालाहरुको स्यावासीसमेत पाएका छौं ।
शैक्षिक सुधारका लागि के–के गर्नुभएको छ ?
२०६९ ओखलढुङ्गा जिल्लाकै शैक्षिक सुधारलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर त्यहाँका सबै पेशागत संघ–संगठनहरु, जिशिका, राजनीतिक दलहरु, शैक्षिक सरोकारवालाहरुको संयुक्त गोष्ठीले जिल्लाको शैक्षिक सुधारको तीन वर्षे मार्गचित्र निर्माण गरेको थियो । त्यहाँ सबै विद्यालयहरुले नमूना विद्यालय बनाउने प्रतिबद्धता जाहेर गरेका थिए । मैले पनि प्रतिबद्धता जाहेर गरेँ । अनि, विद्यालय सुधारमा कटिबद्ध भएर दिनरात लागेँ । प्रतिबद्धता जाहेर गर्ने जिल्लाकै पहिलो प्रधानाध्यापक पनि म नै थिएँ । शैक्षिक, भौतिक र आर्थिक रुपमा नमूना विद्यालय बनाउने मार्गचित्र त्यति बेलै बनाएँ । अनि निरन्तर शैक्षिक अभिवृद्धिका योजनाहरु विद्यालयमा बनाउन थालेँ र सबैको सहयोगले विद्यालयले प्रगति गर्न थाल्यो । सबैभन्दा ठूलो कुरो, सुधारको चाहना नै रहेछ । चाहना भए बहाना हराउने रहेछ । हामीले संस्थागत विद्यालयका राम्रा अभ्यास, अन्य राम्रा विद्यालयका नमूना कार्यको अध्ययन गरेर लागू गर्न शुरु ग¥यौं । अभिभावकको साथ र शिक्षक साथीहरुको निरन्तर सहयोग मिल्यो । विद्यालय सुशासनको थालनी ग¥यौं ।
विद्यालयले गरेका असल अभ्यासहरु के–के छन ?
हामी योजनाबिना केही गर्दैनौं । अनि सामुहिक प्रयासबिना पनि केही गर्दैनौं । वार्षिक कार्ययोजना, नियमित सिकाइ योजना निर्माण, नतिजामा आधारित सिकाइ, जिम्मेवारी बाँडफाँड गरेका छौं । कक्षा पाँचसम्म अंग्रेजी माध्यम पुगेको छ । यो हरेक वर्ष बढाउँदै लगेका छौं । विद्यार्थीहरुलाई नियमित गृहकार्य दिने र परीक्षण पनि नियमित गरेर फिडब्याकसहित अभिभावककहाँ पठाउने गरिन्छ । विद्यार्थीलाई निःशुल्क गृहकार्य डायरी उपलब्ध गराएका छौं । शिक्षकहरुलाई समेत वार्षिक कार्ययोजना र दैनिक पाठयोजना निर्माणका लागि डायरी उपलब्ध गराएका छौं । त्यसको अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने काम पनि गरिन्छ । परीक्षामा शतप्रतिशत नतिजा उपलब्ध गराउन सफल शिक्षकहरुलाई पुरस्कृत र विषयगत शिक्षकहरुलाई सम्मान गर्ने गरिन्छ । शिक्षकहरुलाई पुरस्कार र दण्डको नीतिलाई कडाइका साथ अवलम्बन गरिएको छ । समुदायको समेत यसमा सहयोग रहँदै आएको छ । शतप्रतिशत नतिजा नल्याउने विषयगत शिक्षकहरुलाई विव्यसको बैठकमा बोलाइन्छ । त्यहाँ छलफल गरी समस्या पहिचान र समाधानका लागि कसले के गर्नुपर्ने हो त्यसको योजना मागिन्छ । त्यसका लागि कस्तो नसहित दिने भन्ने निक्र्योल पनि गर्ने गर्छौं ।
विद्यालयका उपलब्धिहरु के–के छन् ?
विद्यालय लगातार दुई वर्षसम्म पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्र र यो वर्ष १ नम्बर प्रदेशबाट नै शिक्षा मन्त्रालयबाट उत्कृष्ट विद्यालय घोषित भएर पुरस्कृत भइसकेको छ । विगतका एसएलसी र एसइइ परीक्षामा लगभग शतप्रतिशत नतिजा आइरहेको छ भने अन्य कक्षाका सिकाइ उपलब्धिसमेत उत्कृष्ट छ ।
विद्यालय सुधारको शुरुवात कहाँबाट गर्नुभयो ?
म यस विद्यालयमा २०७० सालदेखि प्रधानाध्यापक बनेको हुँ । मैले ०६२ सालदेखि यही विद्यालयमा पढाउँदै आइरहेको थिएँ । म प्रअ भएदेखि नै केही योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्न सके उपलब्धि सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने लाग्यो । अनि मैले शिक्षक, अभिभावकहरुसँग सल्लाह गरँे । सबैले साथ र सहयोगको आश्वासन दिएपछि मैले सोही वर्षदेखि नै कक्षा १ देखि अंग्रेजी माध्यम लागू गरेँ । विद्यालय सुधारका लागि पहिलो काम भनेको स्कूलसँग सम्बन्धित सबै सरोकार पक्षलाई पहिले आत्मबोध र जिम्मेवारी बोध गराउने विषय महत्वपूर्ण रहेछ । दोस्रो, योजना निर्माण र त्यसको कार्यान्वयन गराउने रहेछ । र, तेस्रो भनेको अधिकारको विकेन्द्रिकरण रहेछ । सबैले जिम्मेवारी पाए गर्न सक्दा रहेछन् । एक्लैले नहुँदो रहेछ । अभिभावकहरुको सहभागिता बढाउन प्रत्येक १५ दिनमा फरक कक्षाका अभिभावकहरुसँग छलफल गर्न थालेँ । ‘अब विद्यालय एउटा नयाँ शैक्षिक अभियानमा जान्छ, तपाईँले साथ दिनुप¥यो’ भनेँ । ‘अब नयाँ ढंगले अभिभावकको दायित्व निर्वाह गर्नुपर्छ । विद्यालय, विद्यार्थी र शिक्षकहरुको नियमित अनुगमन गर्नुपर्छ’ भनेँ । सबैले त्यसै गर्न थाल्नुभयो । गृहकार्य डायरीमा नियमित र अनिवार्य अभिभावकको हस्ताक्षर गर्ने कार्यले समेत यसलाई सघाऊ पुग्यो । शैक्षिक सुधारका लागि जिशिका, विनि र स्रोतव्यक्तिहरुसँग पनि निरन्तर छलफल गरियो । नमूना कक्षा देखाउनै प¥यो । योजना निर्माणमा सहयोग गर्नुप¥यो । अनुगमन र सुपरिवेक्षण गरिदिनुप¥यो भनौं । उहाँहरुले समेत त्यसै गर्नुभयो ।
समग्र सामुदायिक विद्यालयको नतिजा कमजोर हुनुको कारण के होला ?
सरकारको ठूलो लगानी, विद्यार्थीहरुलाई विभिन्न सुविधाहरु, प्रतिस्पर्धाबाट छानिएका दक्ष शिक्षक, भौतिक सुविधा, शिक्षकको सेवा सुविधा उत्कृष्ट र राम्रो हुँदा–हुँदै नतिजा राम्रो नहुनु दुःखद हो । यसको एउटै कारण भनेको शिक्षामा राजनीतिक हस्तक्षेप हुनु नै हो । शिक्षकहरु पठनपाठनमा भन्दा दलका झोला बोक्नमा व्यस्त छन् । दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था छैन । पढाएपनि, नपढाएपनि हुन्छ, नियमित गए पनि÷नगए पनि हुन्छ, दलहरुले शिक्षकका भातृ संगठनहरु खोलेका छन् । दलका भोट बैंक रहेका शिक्षक दलहरुबाटै संरक्षित छन् । उनीहरुलाई न कसैले दण्ड गर्न सक्छ न त सरुवा नै । न जागिरबाट हटाउनै सक्छ । जे गरेपनि हुन्छ । सामुदायिक विद्यालयमा अभिभावकको चासो पनि कम छ । नियमनकारी निकायपनि प्रभावकारी छैन । यो शैक्षिक अराजकतामा सुधार आउन जरुरी छ ।
के सामुदायिक विद्यालयको अवस्था सुधार हुनै नसक्नेगरी बिग्रिएको हो ?
हजारौं माइलको यात्राको शुरुवात एउटा पाइलाबाट हुन्छ । पहिले आफू सुध्रनु प¥यो नि । प्रअ, विव्यस, शिक्षकहरु सुध्रने । अभिभावक र विद्यार्थी सुध्रने । जिशिअ, विनि र स्रोतव्यक्ति सुध्रने । कसैलाई दोष देखाएर नपन्छिने । कमीकमजोरी सबैका हुन्छन् । सबै सुधारिए पो शिक्षा सुध्रन्छ त । दण्ड र पुरस्कारलाई कडाइका साथ लागू गर्नु पर्छ । अनियमित, अल्छि, खेताला, आलोपालो गर्ने शिक्षक कर्मचारीलाई निरुत्साही गर्ने गर्नु पर्छ । दलहरुले पनि विद्यालय शान्तिक्षेत्र बनाउन केन्द्रित हुनु पर्छ । गतिविधिहरु पारदर्शी बनाउनु पर्छ ।
एउटा विद्यालय सुधारका लागि प्रधानाध्यापकको भूमिका कस्तो रहनु पर्छ ?
विद्यालय सुधारको मुख्य योजनाकार प्रअ बन्नुपर्छ । प्रअ गतिशिल, युग सुहाउँदो र समयसापेक्ष हुनुपर्छ । विद्यालयको स्रोतसाधनलाई अधिकतम परिचालन, विद्यालयभित्र रहेका विविधतामा एकता गर्न र सबै पक्षसँग समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने क्षमता प्रअमा हुन जरुरी छ । प्रअ भनेको शासक होइन, एउटा असल साथी हो भन्ने शिक्षकहरुलाई महशूस गराउन सक्नु पर्छ । शिक्षक–विद्यार्थीका समस्याको समाधान, भौतिक चाँजोपाँजोको व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्थापनको पाटोमा ज्ञान भएको हुनु पर्छ । प्रअले सबैको हित गर्दै विद्यालय सुधार गर्न लागेको छ भन्ने व्यवहारले नै जनाउन सक्नु पर्छ । विद्यालयको सफलता र असफलता प्रअकै हातमा रहन्छ । योग्य, सक्षम, दक्ष, अपडेटेड रहनु पर्छ ।
शिक्षक नेताका विद्यालय बिग्रियो भन्ने आरोप लाग्ने गरेको छ ? तपाईँ पनि शिक्षक नेता नै भएकाले यसमा के भन्नुहुन्छ ?
वास्तवमा पार्टी नै पिच्छेका शिक्षकका संघ–संगठन खुलेका छन् । कैयन शिक्षक नेताको विद्यालय कुन हो थाहा छैन । तर, म त्यस्तो शिक्षक नेता हो जो निरन्तर विद्यालयमा उपस्थित हुन्छु । नियमित कक्षा पनि लिन्छु । ट्रेड युनियन अधिकारका कारण शिक्षकलाई एउटा पेशागत संगठनमा आबद्ध हुन पाउने हक छ । मैले मेरो विद्यालयभित्र राजनीति छिर्न दिएको छैन । आस्थाभन्दा क्षमता र नतिजाका आधारमा शिक्षकमाथि व्यवहार गर्ने गरेको छु । विद्यालय बिग्रियो भन्ने कुरा त हाम्रो स्कूलको सिकाइस्तर हेरे थाहा हुन्छ ।
हाम्रो विद्यालयको मुख्य लक्ष्य भनेकै अब एसएलसी र एसइइमा मात्रै होइन, हरेक कक्षाको नतिजा शतप्रतिशत बनाउने भन्ने नै हो । विद्यार्थीलाई पढौं–पढौं लाग्ने, शिक्षकलाई पढाऊँ–पढाऊँ लाग्ने, शैक्षिक सरोकारवाला र अभिभावकहरुलाई विद्यालयमा जाऊँ–जाऊँ लाग्ने बनाउनुपर्छ भनेर त्यसैमा केन्द्रित भएर लागिरहेको अवसथा छ । सोही खालको भौतिक संरचना निर्माण, शिक्षक व्यवस्थापन, शिक्षण सिकाइ, प्राविधिक र व्यवसायिक शिक्षामा जोड दिने विषयमा हामी लागिरहेका छौं । पशुविज्ञान सञ्चालनमा छ । छिट्टै सिटिइभिटिबाट सवओभरसियरको कक्षा सञ्चालन गर्ने, कम्प्यूटर, इन्टरनेट र प्रविधिमा आधारित सिकाइ, शिक्षकहरुको दक्षता वृद्धिका लागि अनिवार्य कम्प्यूटर, इन्टरनेट र प्रविधिक तालिम दिने हाम्रो योजना छ । अब आवाशीय विद्यालय सञ्चालन गर्ने हाम्रो योजना छ ।
२०७४ कार्त्तिक २ गते ००:२७मा प्रकाशित